आजको खबर : फेसबुक, ट्वीटरमा कसैलाई जिस्काए पाँच वर्ष जेल जाने कानुन बन्दै, सञ्चारमन्त्रीको राजिनामा माग – MySansar
आजको खबर : फेसबुक, ट्वीटरमा कसैलाई जिस्काए पाँच वर्ष जेल जाने कानुन बन्दै, सञ्चारमन्त्रीको राजिनामा माग
Posted on June 15, 2019 by राजेन्द्र मगर
आज जेठ ३१ गते शुक्रबार अनलाइनहरुमा प्रकाशित समाचारहरुमध्ये हाम्रो नजरमा परेका समाचारहरु यस्ता छन्
वाइडबडी प्रकरणमा नागरिक आयोगले साढे चार अर्ब बढी अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले दोषीलाई उम्काउन सेटिङमै चलखेल भएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउन व्यापक जनदबाब सृजना जरुरी भएको समेत बताएको छ।
नागरिक आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले करिव साढे चार अर्ब अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
जहाज खरिद प्रक्रियामा अविश्सनीय कम्पनिहरु रोजिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतितपत्र नखोली रकम निकाशा गरिएको, कमसल सामाग्री जडान गरिएको, खरिद गरिएका बिमानहरु हरेक उडानमा बिश्राम र पुनः उडानको संचालनमा अतिरिक्त भारको कारण आर्थिक रुपमा फाइदाजनक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नागरिक आयोग भन्छ, वाइडबडीमा साढे ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएकै हो भन्दै शिलापत्रले लेखेको छ।
गुठी विधेयक सच्याउन माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन अझै मथ्थर भएको छैन्।
काठमाडाै‌बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धररले गुठी सामान्वादको प्रतिक भएको भन्दै अभिव्यक्ती दिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले राजिनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले काठमाडौं प्रेसलाई भनेका छन्,
त्यो मन्त्रीले जन्माइदिएको हो हामीलाई ? सामन्त भनेको को हो ? काठमाडौंमा को–को सामन्त त अब ? यो जवाफ दिनुपर्ने भयो । यो आन्दाेलन चर्किने संभावना अझ बढ्यो । उसले बोलेपछि त हामीले जनतालाई जवाफ दिनुपर्‍यो नि त– यहाँ समान्त को ? सम्पदा जोगाउँ भन्ने सामन्त हुन्छ ? उहाँ आफैं समान्त हो कि ? मन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्छ । मन्त्रीले यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ । नत्र राजीनामा गर्नुपर्छ। अब आन्दोलन अर्कोतिर जान्छ।
काठमाडौंबासीलाई सामन्त भन्ने सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्दै काठमाण्डु प्रेसले लेखेको छ।
सरकारले गुठीयारको अधिकार समाप्त पार्ने प्रावधान सहित सदनमा गुठी विधेयक ल्याएको भन्दै आजपनि ललितपुरमा मसाल जुलुश निकालिएको छ।
स्थानीय गुठीयार र विभिन्न संघ संस्थाको अगुवाईमा भएको विरोध सभामा सहभागी हुन ललितपुर र काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट मंगलबजार पुगेका थिए।
सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै गुठीयारहरुले नगर परिक्रमा गरे।
गुठी विधेयकविरुद्ध पाटनमा यसरी निस्कियो मसाल जुलुश, फोटोमा हेर्नुस् भन्दै पहिलोपोस्टले लेखेको छ।
फेसबुक ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने प्रावधान यथावत् राखेर सूचना प्रविधि विधेयक अगाडि बढाउन प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले तयारी गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडियालाई समेत कस्ने प्रावधान कायमै राखेर विधेयक अगाडि बढाउन उचित हुने प्रतिवेदन समितिमा पेश भएको छ।
फेसबुक, ट्वीटरमा कसैलाई जिस्काए पाँच वर्ष जेल जाने कानुन बन्दै भन्दै सेतोपाटीले लेखेको छ।
1 thought on “आजको खबर : फेसबुक, ट्वीटरमा कसैलाई जिस्काए पाँच वर्ष जेल जाने कानुन बन्दै, सञ्चारमन्त्रीको राजिनामा माग”
नागरिकले बोले बा थाह हुनेले पोले दिय मानशिक कमाराहरुको मुड्किलो दवावको भर्याङ्ग चढेरै आग्लो कुर्सि ओगत्नेको पोल खुल्छ, नीतिगत रुपमा नाङ्गिञ्छ, रवाफको अन्डरवेरनै फुस्किन्छ अनि बडो पुरुश्थार्ति हौँ भन्नेहरु “लिङ्ग नै गोलमाल भयको पहिचान झुठो भयको लोकतन्त्र मा लोकको दर्जा समेत पाउने नसक्ने प्राणि भयको ठहर हुन्छ/
अचेल यसो गर्न कसैले कसैलाई भन्नु पर्दैन दैनिके हप्ते पत्र पत्रिका गुहार्नु पर्दैन ल्यापटप पनि बोक्नु पर्दैन त्वाईलेतिंग पनि गर्दै मोबाईलमा केहि बेर औंला चलायर यक क्लिक गरे पुग्छ/ तेसैले हो यसो भन्न पाइन्दैन तेसो भन्न पाउंदैन भने ………गरिने भनेर “चम्बले उर्दी” जारि गरेको/
सहि चितायर उर्दी जारि गरेको भय भन्न पाउने तर असत्य भय सजाय पाउने नियम पो बन्थे; पोल खोल्न नपाउने नियम त् बन्दैनथ्यो/ /